Hello Nepal News » ‘आफूलाई व्यंग्य गर्ने’ अर्थुरको मेस्सीले यसरी गरे तारिफ !
‘आफूलाई व्यंग्य गर्ने’ अर्थुरको मेस्सीले यसरी गरे तारिफ !
तर, अर्थुरले मेस्सीप्रति व्यंग्य गरेको एक दिनपछि मेस्सीले भने उनको व्यंग्यको जवाफमा अर्थुरको तारिफ गरेका छन् । मेस्सीले ‘मार्सा’सँग कुरा गर्दै अर्थुरलाई बार्सिलोनाका लिजेन्ड खेलाडी जाभीसँग तुलना गर्दै अर्थुर बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी हुने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २८ असार २०७६, शनिबार १३:०४